Ice Bucket Challenge An’i ALS : Inona Avy Ireo Lesona Azo Tsoahana ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Septambra 2014 13:59 GMT
Efa amam-bola vitsivitsy izay no nisian'ny Ice Bucket Challenge, izay tena lasa malaza sy miparitaka be eny amin'ny aterineto, ary izao ny vokany: olona misimisy no nanao ilay fanamby (farafahakeliny mpandray anjara miisa1,2 tapitrisa raha ny marimarina kokoa), ary niezaka naka tàhaka azy io ireo olona maneran-tany noho ny lazany, ho an'ny antony hafa.
Nanomboka ny voalohandohan'ny lohataona ilay fanentanana, niainga niaraka tamin'ny fandaharana mivantana tao amin'ny fandaharany ho an'ny televiziôna NBC, ny 15 Jolay nataon'i Matt Lauer, mpanolotra fandaharana amin'ny TV, teo anatrehanà Amerikana maro mpijery fahitalavitra. Kelikely foana taorian'izay, nandray anjara tamin'ilay fanamby ihany koa ireo olo-malaza, ny Filoha teo aloha George W. Bush ka hatramin'ny olo-malaza mpilalao sarimihetsika Benedict Cumberbath, manamarika ilay hetsika miparitaka be amin'ny aterineto ary ny lalao tsy azo ialàna aorian'izay.
Raha nahazoana fanampiana mitentina teo amin'ny 41,8 tapitrisa dolara teo ilay hetsika, nanomboka ny 29 Jolay ka hatramin'ny 21 Aogositra, avy aminà malala-tànana vaovao miisa maherin'ny 739.000, manamafy ny tsikera fa lasa mirona kokoa any amin'ny fahafinaretana sy ny fanandratan-tena samirery ilay hetsika, fa tsy any amin'ny fanomezana vola ho fanaovan-tsoa hanampiana ny hafa.
An'arivony maro ireo maty noho ny ALS, fa an-tapitrisany kosa ireo maty isan-taona noho ny tsy fahampian-drano. Asio laharam-pahamehana! pic.twitter.com/xDOirT5O7w” @NjeriThorne
Tsy azo lavina kosa aloha hoe nihamaro ireo olona niha-nahalala bebe kokoa ilay aretina ALS noho ny teo aloha. Vokany tsara nazavain'i Anthony Carbajal mazava tsara tany California izany, izay nandefa lahatsary mampihetsi-po, mampiseho ny fandraisany anjara amin'ilay Ice Bucket Challenge. Ny volana Janoary 2014, nahalala i Carbajal fa voan'ny ALS. Nisy voan'ny ALS ireo fianakaviany tany aloha: maty vokatr'io ny renibeny, ary voan'io ankehitriny ny reniny. Teo am-pikarakaràna ny reniny marary i Carbajal no nahalala fa marary ihany koa izy. Avy eo, nanomboka ilay fanentanana niparitaka be amin'ny aterineto io.
Tsy tia miresaka momba an'io aho, tena tsy tia miresaka momba an'io mihitsy aho. Izany angamba no antony tsy iresahan'iza na iza ny momba an'io, satria tena sarotra jerena be io. Tsy misy olona tia ahita olona malahelo, avy eo maty, izay manana roa ka hatramin'ny dimy taona ivelomana. […] Mianiana aminareo aho fa hiova aminà lahatsarinà saka ny zavatra alefanareo eo, ary ‘Let It Go‘, fa amin'izao ankehitriny izao aloha, manana nomem-boninahitra ho ery amin'ny voalohany ny vondrom-piarahamonin'ireo tratry ny ALS […] Tsy fantatrareo mihitsy hoe ahoana ny fihetseham-poko isaky ny fanamby tsirairay – mankahery ny fanahiko, mankahery ny fanahin'ireo mararin'ny ALS tsirairay avy. Tena manova zavatra tokoa ianareo, ary tena mankasitraka tanteraka izahay.
Tsy azo lavina ihany koa fa misy ireo aretina hafa mora mahafaty noho ny ALS. Ho an'ireo mpikatroka mafana fo te-haka tàhaka ny lazan'io fanamby io ho anà antony hafa azy manokana, misy lesona maromaro azo ianarana avy amin'ilay zava-miseho malaza sy miparitaka be amin'ny aterineto.
Tokony tsy mila tenenina intsony izany, fa rehefa manao ilay fanamby re ianao, mba mitandrema tsara ary mivonona tsara mialoha, raha tsy izany mety haràtra ianao.
Manazava i Beth Kanter, manampahaizana amin'ny media sosialy tsy mitady tombony, fa noho ny lazan'ilay hetsika, voasarika ny hanara-drenirano fotsiny ireo fikambanana manao asa soa sasany, amin'ny fanaovana ny lazainy hoe “Familiviliana Fanampiana – Charity Jacking“:
Kanefa, mampitandrina i Kanter ao amin'ny lahatsoratra manaraka hoe mety tsy hety ny maka tàhaka be fahatany ilay fanamby fotsiny: